Kadib Tababarkii Maanta, Waa Sideed Xaalada Caafimaad Iyo Taam Ahaansho Ee Ciyaartoyda Liverpool? - Gool24.Net
Kadib Tababarkii Maanta, Waa Sideed Xaalada Caafimaad Iyo Taam Ahaansho Ee Ciyaartoyda Liverpool?
May 20, 2020 Mahamoud Batalaale
Kooxda u dooran in ay tahay Championska England ee Liverpool ayaa maanta markii ugu horaysay waxay ciyaartoyda kooxdeedu tababar ku qaateen Melwood tan iyo markii fayraska koroona uu hakadka galiyay xili ciyaareedka Premier League.
Ciyaartoyda kooxda Liverpool ayaa dhamaantood qayb ka ahaa tababarkii maanta wuxuuna Jurgen Klopp shaaciyay in mid kasta oo ka mid ah ciyaartoyda kooxdiisu uu taam u yahay soo laabashada xili ciyaareedka.
Ciyaartoydii Liverpool ka dhaawacnaa ayaa muddadii labada bilood ahayd ee go’doonka lagu jiray waxay ka soo shaqeeyeen taam ahaanshahooda waxaana ka mid ah Shaqiri oo muddo dheer dhaawacyo xili ciyaareedkan la maqnaa.
Ciyaartoyda Liverpool ayaa dhamaantood ka badqaba caabuqa karoonaha, waxayna sidoo kale soo laabteen iyaga oo jidh ahaan u taam ah oo ayna jirin wax ciyaartoy hadda dhaawac ku maqan waxaana sidoo kale jiray xidigo da’yar ah oo kooxda kowaad ka soo muuqday.
Jurgen Klopp oo ka hadlayay xaalada taam ahaansho ee ciyaartoyda kooxdiisa Liverpool kadib tababarkii maanta ayaa yidhi: “Haa kooxdu halkaas ayay joogtaa. Dhamaantood taam ayay yihiin, waxaanan rajaynayaa in ay dabcan sidaas sii ahaadaan”.
Laakiin Klopp ayaa tartan adag u arka in ay u diyaar garoobayaan xili ciyaareed aan wali la garanayn maalinta uu dib u bilaamayo wuxuuna yidhi: “Marka laga eego aragtida sayniska ee Sportska, waa tartan in aad isku diyaariso wax kaas oo aanad garanayn waqtiga uu dhici doono. Taasi waa 25,26 ama 28 ciyaartoy oo ay hal mar yihiin, waxaa waajib kugu ah in aad diyaar noqoto, laakiin taasi waa shaqadayada in aanu samayno- waa sida ay tahay”.
Klopp ayaa qirtay in tababaradii uu online-ka ku bixinayay ay ahaayeen kuwo kaga dhib badan waxyaabaha uu hadda xalinayo wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan ku raaxaystaa dhibaatooyinkan in ka badan dhibaatooyinkii aan dhawrkii toodbaad ee ugu danbeeyay tababarka ku soo maray, sidaa daraadeed, waa shaqadayada in aanu taas xal u helnaa”.
“Horyaalku waxa uu go’aansaday in uu noo ogolaado in aanu bilawno tababarka, hanaanka caafimaad ee maamulka horyaalku waa cajiib”. ayuu Klopp hadalkiisa raaciyay.
Shaqiri, Joel Matip, Naby Keita iyo dhamaan xidigihii Reds ee aan waqtiga fiican qaadanayn markii xiil ciyaareedka la joojiyay ayaa tababarkii maanta ee Reds ka dhex muuqday.
Liverpool ayaa sii wadan doonta tababarka groupyada yar yar u samaysan inta lagu jiro wajiga kowaad ee tilmaamaha caafimaad ee maamulka Premier League iyada oo kooxaha iyo maamlku ay shirar kale ka yeelan doonaan talaabooyinka xiga iyo waqtiga kulamada la bilaabi doono.